मन्चमा कसरी आत्मविश्वासका साथ बोल्ने ? - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips मन्चमा कसरी आत्मविश्वासका साथ बोल्ने ?
मन्चमा कसरी आत्मविश्वासका साथ बोल्ने ?
धेरै मानिसहरुको अगाडी रहेको मन्चमा गएर बोल्न धेरैलाई असजिलो लाग्छ । आत्मविश्वासको कमीले सुरुवातमा मन्चमा गएर बोल्दा खुट्टा र बोली समेत काँप्छन् । तर, बोल्दै जाँदा त्यो समस्या समाधान हुन्छ, किनकी प्रयास गरिरहेपछि आत्मविश्वास बढ्छ । यहाँ त्यो आत्मविश्वास बढाउनको लागि केही टिप्स राखिएको छ :
घरमा ऐना अगाडी उभिएर बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस् ।
आफूले मन्चमा बोल्नुपर्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी लिनुहोस्, सन्दर्भ सामग्री खोजेर पढ्नुहोस् ।
तपाईं अरु कोही बन्ने कोसिस नगर्नुहोस्, आफ्नै तरिकाले विषयवस्तुसंग सम्बन्धित आफ्ना विचारहरु अगाडी राख्ने तयारि गर्नुहोस् ।
बोल्दा हाउभाउको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हाउभाउले स्रोतालाई आकर्षण गर्नुको साथै तपाईं आत्मविश्वासी समेत देखिनुहुनेछ।
बोल्दै गर्दा आफ्नो शिर झुकाएर वा आँखाले तल हेरेर नबोल्नुहोस्। सिधा हेरेर बोल्ने कोसिस गर्नुहोस् ।
दर्शक तथा स्रोतासंग आँखा जुधाउने, आफ्ना शब्द अनुसारको अनुहारको भाव झल्काउने गर्दै भावनात्मक रुपले दर्शकलाई आफूतिर आकर्षण गर्नुहोस्।
तपाईंको कुरा सुनेर टाउको हल्लाइरहेका वा अनुहारको भाव झल्काइरहेका व्यक्तिहरुलाई बोल्दै गर्दा बीच बिचमा हेर्ने गर्नुहोस् ।
गल्ती जोकोहीबाट हुन सक्छ, बोल्दाबोल्दै केही गल्ती भएमा नआत्तिनुहोस् । औंल्याउन सक्ने गरि गल्ती भएमा, माफी माग्नुहोस् र आफ्नो कुरालाई निरन्तरता दिनुहोस् ।
बोल्दा, आफ्ना भनाइमा दर्शक तथा स्रोतालाई पनि समावेश गर्नुहोस् , जस्तै : ‘ तपाईंहरुलाई कस्तो लाग्छ?”, ” तपाईंहरु भन्नुस् त” आदि ।
आफ्ना विचार राख्दा केही उदाहरणहरु पनि समावेश गर्नुहोस् । तर पत्यार नलाग्ने खालका कथा बुनेर उदाहरण नदिनुहोस् ।
तपाईंले साथीहरुको बिचमा, कुनै सानो सामुहिक बहसमा आफ्ना कुरा राख्ने गर्नुभयो भने, तपाईंलाई मन्चमा उक्लेर बोल्न आफै आत्मविश्वास जाग्नेछ ।
Previousसफल बिल गेट्सको असफल सुरुवात
Nextसुन्दर दिनको लागि प्रेरक भनाइहरु